Nidaamka Dredge ee loogu talagalay Nadaafadda & Dayactirka Biyo Xidheenka - Ellicott Dredges
Ka takhalustida shabagyada, ciidda, iyo dhagaxa, ka dambeynta biyo-xidheenka iyo u dhow dhow waxay muhiim u tahay hawlgalka hufan ee nidaamka jiilka awoodda.
Soo uruurinta jiifka ayaa yaraynaya jiilka korantada ee dhaliya korantada iyo mugga biyaha oo aakhirka u baahan qodis si loo xakameeyo hawlgalka hufan. Kaydadka, xoqidda qashinka ayaa si tartiib tartiib ah u dhisi kara una sababi kara kaydinta biyaha iyo arrimaha tayada biyaha.
The Ellicott Taxanaha 670 Dragon® dredge iyo Taxanaha 870JD Jet Dragon® dredge waa labadaba qodax gooyo goobeed oo la qaadan karo kuwaas oo ku habboon mashaariicda dayactirka ee soo noqnoqda si looga saaro dhoobada, ciidda iyo quruurux biyo xidheennada gadaashooda, baraagagga iyo baraagyada.
Taxanaha 870JD Dragon® Dredge
Dayactirka Biyo Xireenka
Isticmaalka qoditaanka si looga takhaluso jilicsanaanta, ganaaxa, ciidda, quruuruxa, iyo qashinka kale ee ka dambeeya biyo xireenka iyo hareeraheeda wixii la mid ah qaab dhismeedkiisa sida Hoover Dam ee Las Vegas, Nevada (USA) ama Jarmalka Rappode Dam waa shaqo muhiim ah oo xaqiijineysa hawlgal hufan ee nidaamka dhalinta korontada biyo xidheenka iyo helitaanka heer biyo ku habboon.
Qulqulka dabiiciga ah ee biyaha ayaa sida caadiga ah sababa baahida loo qabo qashin qubka joogtada ah ee meelaha sida Guatemala ama Singapore. Ka sokow qodaalka cusbo ama quruurux ee miinooyinka, qodidda keydku waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee lagu dhaqmo qodidda. Kaydadku waxay bixiyaan barkado biyo ah oo ay cabaan dadka ku nool Malaysia waxayna awood u leeyihiin dadka u dhashay Uganda ee ku nool meelaha kale ee adduunka.
Kharashka qodidda si loo keydiyo kaydku wuxuu iskiis isu bixiyaa iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda fudud ee ah in kaydadku ay sidoo kale u adeegaan sidii il cunno dabiici ah iyo deegaan u ah dhir iyo xayawaanno badan oo nool. Nabaad guurka dabiiciga ah, wasakheynta biyaha, iyo xaalufinta dhirta ayaa dhammaantood gacan ka geysta xirmidda baraagaha hareeraha iyo qashinka kale ee halista ku haya kheyraadkaas dabiiciga ah. Qodista waa howlo dayactir aad loogu baahan yahay oo loogu talagalay kaydadka adduunka oo dhan.
In kasta oo cabir ahaan sida caadiga ah ay yar yihiin, haddana baararku weli waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah si loo hubiyo awoodda iyo abuuritaanka korantada. Ellicott yar-yar iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo nuugaya soo nuugiddu waxay ku habboon yihiin mashaariicdan cabbirka leh - gaar ahaan kuwa ku yaal meelaha fogfog oo alaabada waaweyn ee waaweyn aaney u suuroobayn.
Dhuxul Awooda Dhuxusha Dhuxusha ayaa Adeegsata Ellicott® Dredge si ay u soosaarto Afar Qalab oo Faa'iido Leh
ENR Maqaalka “Dhuxul Daadinta Dhuxusha Waxay Ka Baxeysaa Dhibaato Weyn”; TVA waxay kireysaa Adeegyada Deegaanka ee loo yaqaan 'Sevenson' oo loogu talagalay $ 60mm Nadiifinta Adeegsiga Maraakiibta Ellicott® Dredges
Nidaamyada Sahaminta ku saleysan ee DGPS ee Mashaariicda Yar yar